DEG DEG Xanun aan Horey loo arag oo ka dilaacay Burco | Saxil News Network
DEG DEG Xanun aan Horey loo arag oo ka dilaacay Burco
Burco (Saxilnews.com)…qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan Magaalada Burco ee xarunta Gobolka Togdheer ayaa cabasho ka muujiyey dad ay sheegeen inay qabaan cudurro kala duwan, oo Magaaladaasi ku soo badanaya.
Dadka ay cabashada ka muujiyeen reer Burco ayaa qaarkood qaba cudurro ay caalamadahoodu ka mid yihiin Caga-barar iyo indho-barar, kuwaasi oo jidadka Magaaladaasi fadhiya isla-markaana Sadaqo waydiista dadweynaha.
Dadkan Lugaha intooda hoose ay aadka u bararsan tahay isla-markaana indhahoodu bararsan yihiin ayaa la sheegay in qaarkood dalka ka soo galeen dhanka Itoobiya, isla-markaana ka baxsadeen hawl-gallo ay ciidamada laanta socdaalku ku raafeen tiro badan oo dadkaasi ka mid ah oo dhawaan dalka looga saaray dhanka dalka Itoobiya.
“Dadkii iyo dalkii war looma hayo oo dawladdii iyadaa isku mashquulsan oo dunidaba war uma hayaan, waayo Magaaladii waxa ka soo buuxsamay dad luguhu barareen oo indhuhu barareen oo meel walba barartey oo cudurro qaba” sidaa waxa sheegay mid ka mid ah dadweynaha ku dhaqan Magaalada Burco oo ka hadlayey barnaamij Ri ururin ah oo uu Sameeyay Telefiishan.
Muwaadinkan oo sii hadlaya ayaa sheegay in aanay iyagu garaneynin halka dadkan cudurrada qabaa ka yimaaddeen “Meel ay ka yimaaddeen dadkaasi ma garanayno, cid waddanka hoos u eegaysaana ma jirto….”ayuu hadalkiisa raaciyey, inkasta oo dad kale oo aanu y la xidhiidhay sheegeen in dadkaasi u badan yihiin Itoobiyaan.
Taliyaha laanta socdaalka Somaliland, Maxamed Yuusuf Cambaro ayaa 26-kii bishii hore sheegay in dalka laga mastaafuriyey dad ku dhow laba boqol oo itoobiyaan ah, kuwaasi oo uu sheegay inay qabeen xanuuno faro-barar ka mid yaay “Waxaanu toddobaadkii hore dalka ka saaray dad Juudaan qaba, faro barar qaba, cudurada fida qaba oo tiradoodu dhan tahay 191, kuwaas oo aanu u dhiibnay xukuumadda Itoobiya. meelaha aanu ka qabanay waxaa ka mid ah Gobolka Awdal, Gabiley iyo Caasimadda” ayuu yidhi Taliyaha Socdaalka Somaliland oo u waramayey wakhtigaasi laanta afka Soomaaliga ee Idaacadda BBC-da, waxaanu intaasi ku daray in hawl-galkaasi oo sii socda ay ku qabteen oo kale ilaa 70 qof oo dadkaa hore la mid ah. laakiin ma sheegin in goobaha laga qab-qabtey ay ku jirto Burco.